Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 20aad | Jowhar Somali News Leader
Waa habeen ka mid ah habeenada ay Yaasmiin la kulanto Mursal sida caadada ahna waa ay kaga sii hormari jirtay deerka banaanka gurigooda ku yaal iyadoo in cabaar ah fadhisa ayaa uu yimid oo uu ku yiri.
Waan ogahay caawa waan kaa soo daahay iga raali noqo Abaayo
Raali gelinta in salaanta aad ka soo hormarisid ayay aheyd mise!
Mursal inta uu qoslay ayaa uu yiri
Waxaan is iri armaa laguu xanaaqsan yahay oo salaanta laguugu seyraa sidaas ayaan raali gelinta u soo hormariyey.
Maxaad sidaa u leedahay ma anaa awoodaba in aan ku maxkamadeeyo
Maxaa jira sow lqof aga soo daahay ma tihid yaa kuu diiday in aad I xisaaabiso waa qasab taa
Mursalow aniga wax badan ayuu qalbigeyga I weydiiyaa hadana su’aalahaas badan jawaab uma helo
Haye ma ku saacidaa bal ii sheeg maxay yihiin
Horta Mursalow wax jaceyl ah ma ii qaaday ileyn shalay aniga jaceylka kugu casuumay oo ku calmaday ee horta ugu yaraan ma iga heshay.
Haye hadalkaaga meesha ugu dambeysay ayaan ka qabanayaa waxaad I tiri ugu yaraan ma iga heshay haa waan kaa helay waliba dabeecadaada degan ayaan ka helay waxaana aaminsan nahay in adiga iyo aniga meelo badan iska leenahay micnaha dabeeacada.
LIBIN JACEYL WQ: XAALI X MAXAMED (XAALKOOS) xaalkoos@hotmail.com Waxeeyna gaar u tahay Jowhar.com / Jowharcom@gmail.com la soco Jimco walba.
Haye haddii sidaa ay tahay jaceyl ma ii qabtaa sida aan kugu qabo
Ma ogtahay in jaceylka uu ku abuurno ka Helid iyo kalsooni labada qofood dhexmarto intaas waa inoo dhaceysaa maxaa kale.
Laakiin weli jawaabtii rasmiga ima siinin
Malaha gobolada aan ka kala nimid ayaa kala badalan afsoomaaligana waan isku fahmi la nahay haye.
Xiriirkaan hortiis xiriir ma ku soo maray oo gabar ma jeclaaday
Xiriirkaan hortiis xiriir ima soo marin laakiin gabar aan jeclaaday waa jirtaa
Waxaan u fahmay qof ayaad jeclaaday balse xiriiri idinna dhex marin
Haa waa sida aad u fahamtay
Maxaa jaceylkaaga ugu sheegi weyday
Inta aan u sheeganin ka hor ayaan ogaaday in ay qof kale jeceshahay marka waan iska daayey.
Sidee! sidee ku deysay mar hadaan la qabin waan u sheegan kartay
Jaceylka dhabta ah ayaa ah in qofta aad jeceshahay aad farxadeeda ku ilaaliso xataa haddii ay farxadaas tahay mid adiga qaraar kuu ah waana mida aan ugu deeyey nafteeda meesha ay la heyso.
Gabadhaas ma aqaan aniga
Ma wada shaqeysaan
Gobolkii aad ka timid ayaan u qaatay sow sidaa maaha.
Weli ma jeceshay
Waa su’aal aad u qaldan abaayo aniga caawa adiga ayaan ku horfadhiyaa waxaanu nahay dad xiriir uu ka dhaxeeyo ma aha in aad arrintaas aad I weydiiso.
Laakiin ma ogtahay in aad weli I dhihin waa ku jeclahay.
Hadaba kuma rabo miyaan ku dhahay maxay tahay sababta aad caawa wax badan ii qodqodeysid mise iguma kalsoonid.
Maya aboowe sidaa maaha balse waxaan rabaa in aad noloshaada aan wax badan ka go’aado.
Haddii ay sidaa tahay caawa mid iga ogow nolosheyda adiga ayaan kuu hibeeyey wax kasta oo nolosha igu soo gaaray waxaan aaminsan nahay in aad adiga I ilowsiin kartid horan kugu dhahay wax badan oo xaga dabeecada ah ayaan iska leenahay waana waxa aan kugu soo dhawaanayo ma fahamtay waxba ha iga shakin.
Maya walaahi marnaba kaama shakin ee af dheeri lee iga ahaayeen
Xaq ayaad u leeahay in aad wax badan aad ka barato cida aad noosha la wadaageyso laakiin mid iga hoo Mursal adiga oo kaliya ayaa leh.
Yaasmiin farxad dardeed ayaa ay inta ay gacantiisa soo qabatay ayay dhunkatay oo ay ku tiri.
Iga raali ahaaw macaane ma dooneynin in aan ku dhaawaco
Igu kalsoonaaw haye
Yaasmiin madaxa ayay u ruxday iyada o dareensiineyso in ay ku kalsoon tahay habeenkaas Yaasmiin marnaba kama qoomameyneynin hadaladii ay caawa ku nudnudeysay Mursal maxaa yeelay ugu dambeyn kalsooni weyn ayaa gashay mar haddii uu u sheegay in iyada oo kaliya ay leedahay habeen farxadeed ayay u ahayed in cabaar ah kadib ayaa la kala tagay oo qof waliba guriga dib ugu laabatay iyadoo hurdo wanaagsan la isku rajeeyey.
Mursal habeenkaas si toos ah uma abaarin Guriga waxa uuna in cabaar ah iska fadhiyey maqaayada laamiga ku taal isaga oo wax badan naftiisa ka weydiineysay sida uu nolosha ula wadagi karo qof uusan jecleyn balse waxa uu isku qanciyey inuu maalin uun uu jeclaan doono.
Previous articleHogaamiyaha Xisbullah oo ku hanjabay in Maraykanka iyo Israel uu burburin doono
Next articleWasiir ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya oo ku baaqay in la kordhiyo duqeymaha diyaaradaha Drones